” မတူညီသော တူသောအချိန် “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ” မတူညီသော တူသောအချိန် “	16
” မတူညီသော တူသောအချိန် “
Posted by ခင်ခ on Dec 23, 2014 in Creative Writing, Poetry | 16 comments
Kaung Kin Pyar says: ရွာဓလေ့ကတော့ ရရာနဲ့ တင်းတိမ်တယ်နော်…လေးခ….။
ဒါပေသိ သူရို့လဲ မနက်လေးနာရီလောက် ထ၊ ထမင်းကြမ်းအ၀စားပြီး…ကောက်စိုက် ပျိုးနှုတ်တော့ လုပ်ကြတာပါပဲ….
ခင် ခ says: ဒီလိုလဲတွေးလို့ရတယ်ဗျ
သူတို့ဆီမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းက ကောက်စိုက် ပျိုးနုတ် စပါးလေ့ ဆီကြိတ် ဒီလောက်ဘဲဆိုတော့လဲ အေးရာအေးကြောင်း နေကြဟန်ပါဘဲလေ။
Yae Myae Tha Ninn says: သို့သော် ရွာဓလေ့က သေနတ်အပစ်ခံရတာ စိတ်မကောင်း… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: မတူရင် မတုနဲ့ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်လေဗျ။
ယှဉ်မရတာကို အတင်းဆန္ဒပြနေတော့လဲ ခံရုံရှိတော့မှာပေါ့လေ။
ပေးလျှော်တုန်းက ရသလောက်ယူလိုက်ရင် အဲဒါ အရှုံးထဲကအမြတ်ပေါ့။
aye.kk says: အေးချမ်းတဲ့တောရွာဓလေ့
ကရင်တောမှာနေကြတာ အေးချမ်းသလားမမေးနဲ့ 
ခြံယာလုပ်စားကြပေမယ့် ဝမ်းတစ်ထွာအတွက် အပူပင်မရှိသလို
အေးချမ်းစွာနေထိုင် စားသောက်ကြတယ် ။
သီးပင်စားပင်စုံလင်စွာနဲ့ ၊ ဘာတစ်ခုမှဝယ်ချမ်းစားတာမတွေ့ ရဘူး။
ငါးဆိုလည်း စမ်းချောင်းလေးထဲမှာ မျှားပီးစားတယ် ။ ပျော်စရာကောင်းတယ်။။
ခင် ခ says: ဟုတ်တယ်ဗျ သူတို့က ၀ယ်စားရတယ်ဆိုတာ မရှိသလို လတ်လတ်ဆပ်ဆပ်လေးလည်းစားရတယ်လေ။
Kaung Kin Pyar says: ကရင်တွေက အိုက်လိုပဲ အန်တီအေး….။ စိတ်သဘောကောင်းပြီး အေးချမ်းတယ်…..ခုခိ..ခုခိ…
တောင်ပေါ်သား says: နာတို့ ကချင်တွေလည်း အေးချမ်းချင်ပါတယ်ကွယ်
ခင် ခ says: ကရင်ကော ကချင်ရော ရခိုင်ရော ဘာရော ညာရော အကုန်ငြိမ်းချမ်းကြရင် အလွန်သာယာဖွယ်ပေါ့ဗျာ။
ခင်ဇော် says: စိုက်စရာ လယ် မရှိတော့လို့လားဟင်?
မြစပဲရိုး says: မြို့လည် လဘက်ရည်ဆိုင် တွေ၊ စူပါမာ့ကက် တွေ၊ စားသောက်ဆိုင် တွေ မှာ အချိန်ပြည့် လူတွေ ဒင်းကြမ်းပါဘဲ ကိုခ ရယ်။
La Yeik says: ရွာလေးဒွေလဲ အခု မငြိမ်းချမ်းတော့ပါဘူး အူးခရယ်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: La Yeik ရေ ဟုတ်တယ်နော် ရွာတွေလဲ အခက်တွေ့ကြရပြီ။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ရွာဂ ဂျီးဒေါ်တွေကို လွမ်းလွန်းလို့ သေနိုင်တယ်. . Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: အချိန်အား ရရင် ရွာ အလည်ပြန်ပေါ့ဟ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 82
အတွေးလေး says: ရွာမှာ က ကိုယ့်ယာ သူ့ ယာ အလှမ်းဝေးလှတာမဟုတ်တော့ သုတ်သုတ် လည်းသွား/ပြန် စရာ မှမလိုပဲလေ